Nagu saabsan - Baoding Mingshuo Qalabka Korontada Warshadaha Co., Ltd.
Maxaan taageeri doonaa?
1.Waxaan nahay soo -saare ka badan 10 sano R&D iyo waayo -aragnimo wax -soo -saar, Mar kasta oo ay dhibaato jirto Mashiinka Alxanka Sare, waxaan heli karnaa dhibaatada oo aan xallin karnaa, ma noqon lahayd xaalad ceeb ah oo dadka aan la heli karin kadib sanado badan.
2.Taageeradda Qiimaha Ugu Fiican
3. Taageerada Farsamada & Iibka
4. Bixinta Ilaalinta Tirada
Waxaan dammaanad qaadi karnaa tirada amarrada xilliga kulul ama yaraanta. Dalabkaagu waa la horumarin doonaa.
5.Taageero caddaalad ah oo ganacsi
Waxaan si joogto ah uga qayb qaadan doonnaa bandhigga tuubada birta xirfadda leh, sida Carwada Ganacsiga Caalamiga ah ee Tube & Biibiile ee dalal kala duwan, si aan isu weydaarsano oo aan uga doodno arrimaha ku saabsan tuubada birta.
Adeeg noocee ah ayay kooxdayadu ku siin kartaa?
Kooxda Iibka Xirfadle:
Siinta macaamiisha fikrad xirfadeed iyo talo, si ay kaaga caawiso inaad ogaato tirada iyo nooca Solid state HF Welder ku habboon baahidaada.
Taageerada Kooxda Farsamada:
Shuruud kasta oo farsamo, iyadoon loo eegin mid weyn ama mid yar, Kooxdayada Farsamadu waxay falanqayn doonaan shuruudda waxayna u samayn doonaan jawaab celin faahfaahsan macaamiisha.
Kooxda Xakamaynta Tayada:
Badeecad kasta waxaa hubin doona Kooxdayada Xakamaynta Tayada, si loo hubiyo in dhammaan badeecaduhu aysan liis dhibaato ku yeelan Manuel Control Control .Qaybo ka mid ah qalabka korontada ee korontada ayaa la mariyey daaweyn gaar ah si looga dhigo kuwo u adkaysta heerkulka sare iyo cadaadiska sare.
Kooxda Iibka Kadib:
Kooxdani waxay kuu qaban doonaan adeegga iibka kadib, waxay si dhakhso ah kuu siin doonaan xal faahfaahsan su'aasha ama dhibaatada aad la kulantay.